12um 1024 * 768 အပူ
17um 640 * 512 အပူ
12um 640 * 512 အပူ
EO / IR ကင်မရာ Module
အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ်ကင်မရာသည်တိုင်းတာသောအရာဝတ္ထု၏တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အရာဝတ္ထု၏တည်နေရာအပါအ ၀ င်တိုင်းတာထားသောအရာဝတ္ထု၏အပူချိန်ကိုဖြန့်ဝေခြင်းအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သုံးပုံရိပ်ကင်မရာများ၏အားသာချက်သုံးခု： ၁။ အသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်။
အနီအောက်ရောင်ခြည်လေဆာကင်မရာကဘာလဲ။ ဒါကအနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းလားလေဆာလား? အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းနှင့်လေဆာရောင်ခြည်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ စင်စစ်အားဖြင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်လေဆာသည်ကွဲပြားသောအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်လေဆာသည်ဤအယူအဆနှစ်ခု၏လမ်းဆုံ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်： မြင်နိုင်သောအလင်းလှိုင်းအလျား ...
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးကင်မရာသည်နယ်စပ်ကာကွယ်ရေးအသုံးအဆောင်များအတွက် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ 1. ညအချိန်တွင်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင်ရှိသောပစ်မှတ်များအားစောင့်ကြည့်ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းမြင်နိုင်သောကင်မရာသည် IR illumination မပါဘဲညအချိန်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါကအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ်သည် passively လက်ခံ ...
Thermal Camera Features နှင့်အားသာချက်
ယနေ့ခေတ်တွင်အပူကင်မရာသည်အမျိုးမျိုးသောအသုံးချခြင်းများတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဥပမာသိပ္ပံနည်းကျသုတေသန၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ R&D အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အဆောက်အအုံစစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောတာဝေးပစ်အပူကင်မရာအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
SONY Camera အစားထိုးရန်အကြံပြုထားသောကင်မရာ SG-ZCM2030DL
ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်း network zoom ကင်မရာနှင့်ဒီဂျစ်တယ် zoom ကင်မရာ (LVDS) အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော zoom ကင်မရာမော်ဒယ်လ်ရှိသည်။ SONY မော်ဒယ်များစွာကိုယခုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်၍ သုံးစွဲသူများစွာက 30x zoom ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ SG-ZCM2030DL ကို အသုံးပြု၍ SONY ကင်မရာ FCB- EV7520 နှင့် FCB-EV7520A နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။
အသစ်ဖြန့်ချိ OIS ကင်မရာ
၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာတွင်ကင်မရာအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ချိလိုက်သည်။ 2Megapixel 58x Long Range Zoom Network Output OIS Camera Module SG-ZCM2058N-O မြင့်မားသောအလင်းအင်္ဂါရပ်များ - 1.OIS အင်္ဂါရပ် OIS (Optical image stabilization) ဆိုသည်မှာ optical komponent များ၏ setting အားဖြင့်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲမှန်ဘီလူးကဲ့သို့သော ...
Defog Camera ဆိုတာဘာလဲ။
အကွာအဝေးရှည် zoom ကင်မရာသည်အမြဲတမ်း defog အင်္ဂါရပ်များရှိသည်၊ PTZ ကင်မရာ၊ EO / IR ကင်မရာ၊ ကျယ်ပြန့်စွာကာကွယ်ရေးနှင့်စစ်ရေးတို့တွင်အသုံးပြုသည်။ အဓိကအားဖြင့်မြူထိုးဖောက်ခြင်းနည်းပညာနှစ်ခုရှိသည်။ ၁. Optical defog ကင်မရာသာမန်မြင်နိုင်သောအလင်းသည်မိုclouds်းတိမ်နှင့်မီးခိုးကိုမထိုးနိုင်သော်လည်းအနီးတွင်ရှိသော ...
Savgood ကွန်ယက်၏ module များတွင် optical defog function ကို
အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်ကင်မရာများသည်ပြင်းထန်သောအလင်း၊ မိုးရေ၊ ဆီးနှင်းနှင့်မြူများမှတစ်ဆင့် ၂၄/၇ စစ်ဆေးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မြူအတွင်းရှိ Aerosol အမှုန်များသည်အထူးသဖြင့်ပြproblemနာဖြစ်ပြီး၊ ပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုယုတ်လျော့စေသောအဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုးလေ ၀ သ
အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ခြင်းသည်နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရခက်သည့်ရာသီဥတုနှင့်လုံးဝမှောင်မိုက်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများသို့မဟုတ်မှောင်ခိုတင်သွင်းသူများအားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည်တကယ့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည် သို့သော်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ်ကင်မရာများသည်ဌအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်
Savgood သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Zoom Block Camera ကို 800 Fm ထက်ပိုသော stepper driver Auto Foucs Lens ဖြင့်ထုတ်ပေးသည်။
Long Range Zoom ဖြေရှင်းချက်အများစုသည်သာမာန် box ကင်မရာနှင့် motorens Lens များကိုအသုံးပြုကြသည်။ အပို Auto Focus board ပါ ၀ င်သည်။ ဤဖြေရှင်းချက်အတွက်အားနည်းချက်များ၊ ထိရောက်မှုနည်းသော Auto Focus သည်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်အာရုံလွဲသွားလိမ့်မည်။ ကင်မရာနှင့် ...
အမှတ် ၄၀၆ Xintiandi လမ်း၊ တရုတ်ပြည်၊ Hangzhou မြို့